चोरमार्गबाट पशुपति दर्शन र हराएको मोबाईल - Everest Uncensored
556 HIKES and counting
Admin Hike to Jamacho
2021-09-09 / Hiking
Hike to Chandragiri
2021-08-17 / Hiking
DMT Outing to Om Adhyay Retreat Resort
2021-04-21 / Recreation
DSS PLUS2HIKE TO CHISAPANI
2021-04-19 / Hiking
DSS PLUS2HIKE TO KAKANI
Archives Select Month September 2021 (1) August 2021 (1) April 2021 (3) March 2021 (3) February 2021 (1) July 2020 (1) June 2020 (2) May 2020 (2) April 2020 (6) March 2020 (11) February 2020 (1) January 2020 (9) December 2019 (6) November 2019 (4) October 2019 (8) September 2019 (8) August 2019 (6) July 2019 (7) June 2019 (10) May 2019 (6) April 2019 (9) March 2019 (10) February 2019 (3) January 2019 (5) December 2018 (6) November 2018 (9) October 2018 (5) September 2018 (8) August 2018 (6) July 2018 (7) June 2018 (7) May 2018 (10) April 2018 (5) March 2018 (8) February 2018 (3) January 2018 (16) December 2017 (8) November 2017 (2) October 2017 (7) September 2017 (4) August 2017 (8) July 2017 (7) June 2017 (6) May 2017 (5) April 2017 (7) March 2017 (5) February 2017 (4) January 2017 (11) December 2016 (5) November 2016 (8) October 2016 (4) September 2016 (6) August 2016 (4) July 2016 (9) June 2016 (9) May 2016 (7) April 2016 (5) March 2016 (4) February 2016 (3) January 2016 (9) December 2015 (6) November 2015 (6) October 2015 (1) September 2015 (4) August 2015 (6) July 2015 (9) June 2015 (4) May 2015 (5) April 2015 (11) March 2015 (12) February 2015 (5) January 2015 (13) December 2014 (9) November 2014 (7) October 2014 (4) September 2014 (8) August 2014 (9) July 2014 (7) June 2014 (9) May 2014 (6) April 2014 (11) March 2014 (7) February 2014 (7) January 2014 (11) December 2013 (13) November 2013 (7) October 2013 (8) September 2013 (9) August 2013 (8) July 2013 (10) June 2013 (7) May 2013 (8) April 2013 (10) March 2013 (8) February 2013 (8) January 2013 (9) December 2012 (10) November 2012 (9) October 2012 (14) September 2012 (4) August 2012 (6) July 2012 (5) June 2012 (7) May 2012 (5) April 2012 (9) March 2012 (7) February 2012 (7) January 2012 (6) December 2011 (8) November 2011 (5) October 2011 (2) September 2011 (7) August 2011 (6) July 2011 (2) June 2011 (1) May 2011 (2) April 2011 (2) March 2011 (6) February 2011 (2) January 2011 (8) December 2010 (12) November 2010 (20) October 2010 (20) September 2010 (15) August 2010 (17) July 2010 (11) June 2010 (23) May 2010 (28) April 2010 (22) March 2010 (28) February 2010 (26) January 2010 (28) December 2009 (30) November 2009 (15) October 2009 (14) September 2009 (17) August 2009 (22) July 2009 (28) June 2009 (38) May 2009 (47) April 2009 (37) March 2009 (38) February 2009 (43) January 2009 (43) December 2008 (50) November 2008 (37) October 2008 (29) September 2008 (34) August 2008 (36) July 2008 (70) June 2008 (54) May 2008 (46) April 2008 (40) March 2008 (37) February 2008 (37) January 2008 (27) December 2007 (51) November 2007 (40) October 2007 (52) September 2007 (66) August 2007 (57) July 2007 (24) June 2007 (31) May 2007 (25) April 2007 (31) March 2007 (23) February 2007 (36) January 2007 (42) December 2006 (50) November 2006 (72) October 2006 (34) September 2006 (37) August 2006 (14) July 2006 (10) June 2006 (12) May 2006 (7) April 2006 (16) March 2006 (4)
चोरमार्गबाट पशुपति दर्शन र हराएको मोबाईल
पशुपतिनाथ उसैपनि चर्चामा आईरहन्छन् । कहिले भेटी विवाद कहिले भने पुजारी नियुक्तीको कुरा । पशुपतिनाथले जे भए’नि जसोगरे’नि सहेका छन् । त्यही चरणलाई बिस्रेर लाखौ दर्शनार्थीहरु शिवरात्रीको मध्यरात देखि ओइरिए पशुपतिको दैलौ टेक्न ।
भीड पनि जुलुश जस्तै । लथालिङ्ग र अव्यवस्थित । पशुपति प्रवेशका लागि मात्र लाईनको व्यवस्था । बाहिर चोक अनि चारै दिशातिर हुलमुल ज्यादा । पशुपति क्षेत्र प्रवेशको चारै नाकामा विशाल सुरक्षा । मुल सडकतिर मान्छेका व्यापक चहलपहल । तीनकुने बतीसपुतली अनि ज्ञानेश्वरबाट दर्शनार्थीहरु पैदलमा पशुपतिनाथ पुगेका थिए । पशुपति विकास कोषले गरेको प्रवेश व्यवस्था राम्रो थियो । तर यता ती सहज मार्ग छोडेर चोरमार्ग वा असहज मार्गबाट हजारौ दर्शनार्थीहरु पशुपति सम्मुख पुगेका थिए । यता प्रहरी र स्काउटका आँखा छलेर पनि पशुपतिनाथ सम्म पुगेका थिए सयौ दर्शनार्थीहरु । आखिर लामबद्ध हुदाँ रातै पर्ला । भरतपुर चितवनबाट आउनुभएकी राधा बाँनियाले भन्नुभयो । आज सकिन्न टाढैबाट दर्शन गरेर फर्किन्छु ।
पशुपति पुग्नका लागि राजधानीको शहिद गेट र रत्नपार्कमा गाडीको अभाव थियो । त्यसमा फेरि यातायातका चालकहरुले शुल्क आफै तोकिरहेका थिए । तरपनि पैसाको चिन्ता नगरी उनीहरु पशुपति पुग्नका लागि हतारिएका थिए । गाडी पनि ज्ञानेश्वर भन्दा उता जान दिइएको थिएन । चारैतर्फको यस्तो सुरक्षा व्यवस्थाले सम्भावित यातायात जामलाई घटाएको थियो भने अर्का तर्फ दर्शनार्थीहरु पैदल हिड्नुपर्ने बाध्यता भयो । पैदलको थकान नमार्दे फेरि घण्टौ लाईनमा बस्नुपर्ने परिस्थितीमा पनि भक्तजनहरु थकित देखिएका थिएनन् । पैदलपनि सहज थिएन पुरै सडकमार्ग बजार बनेको थियो । जयबागेश्वरी मार्ग बिचैैमा व्यापार अपार बनेको थियो । त्यस्तै सिनामंगल मार्ग पुरै अस्तव्यस्त थियो । एकअर्कामा स्पर्श नभई हिड्न मुश्किल थियो । असन जस्तै चार बजारका भीड एकैपटक ओईरिएको महसुस गर्ने सकिन्थ्यो । यसले लाईन बस्नेहरु र फर्कि्रएकाहरुलाई निकै सताएको थियो । गौशाला चोक पुरै मानव भेलले ढाकेको थियो । गौशाला मध्यभागको ट्राफिक पोस्ट दर्शकका लागि विश्राम पोस्ट बनेको थियो ।
पशुपतिमा बिशाल जनलहरको दृश्य रमाईलो थियो । सुरक्षा व्यवस्था आपतकालीन सुरक्षाका लागि रेडक्रस अनि स्वास्थ्य संस्थाहरु खटिएका थिए । धैरै स्थानमा पानी र नास्ता व्यवस्थाले दर्शनार्थीहरु खुशी देखिन्थे । प्रवेशका लागि कडारुपमा खटिएका स्काउटले राम्रंै काम गरेका थिए । यता फेरि छालाका जुक्ता निषेध गरिएता पनि त्यही स्थानबाट केही प्रहरीहरु निर्धक्क प्रवेश गरे ।
पशुपति दर्शनका लागि बसेका हजारौ दर्शनार्थीका लाईन वास्ता नगरी चोरमार्गबाट पसेकाहरु लाईनमा मिसिएर दर्शन गर्ने सफल भए । तर ज्यादा संख्यामा यो बढेपछि वागमती नदीको मध्यभागमा प्रहरी खटेर सयौलाई फर्काइयो ।
पवित्र वागमतीको जलबाट मुख धोएर पशुपतिको दर्शन भने औलाले गन्न सक्ने जतिले मात्र गरे । दुर्गन्धले मन नमानेको भन्दै दर्शनार्थीहरु यसबाट दुर-दुर रहे । भारतबाट आएका एक भक्तजनले घण्टौसम्म नदीभित्र रहेर प्रार्थना गरिरहँदा नेपाली दर्शनार्थीहरुका लागि हाँस्यपद दृश्य बनेको थियो । एक जना दर्शन गरेर फर्किएकाले सो दृश्य हेर्दे थुकेका थिए । किन थुक्नुभएको मैलै प्रश्न गर्दा नाक छोप्दै दुर्गन्ध आएको भन्दै पुल छेऊबाट अलप भईन ।
यत्रो नेपाली दर्शनार्थी भरिएको आजको पशुपतिनाथ परिसर तीन/चार समुहमा मात्र विदेशी पाहुना देखिए । एक जोडी विदेशी पर्यटक बिचैबाट लामबद्ध भएर बसे । घण्टौ लाईनबाट अघि बढेका ती जोडी बिचैबाट निकालिए । अनि उनीहरु स्वतन्त्ररुपमा श्लेशमान्तन बनतिर यात्रा अघि बढाए । लाईनमा युवाहरुको संख्या ज्यादै कम थियो । कारण उनीहरुको जमघट भने बाबाको बसाँईतिर थियो । जहाँ बसेर नेपाली १० रुपैयाँमा मनलाई स्वर्ग पुर्याउने बुटीपान गर्दे थिए । वरिपरि मन व्याकूल बनाउने धुँवाको बादल बनेको थियो ।
पशुपतिनाथको शिवरात्री दर्शनयात्रा यस्तैै रहन्छ हरसाल । यो साल भने गत वर्षको संख्यामा दोब्बर देखिए । पशुपति यात्रामा अर्काे दृश्यमा नाङ्गाबाबा पनि आउँन्छन् । आफुलाई नागाल्याडबाट आएको बताउने बाबाहरु चर्चित दृश्य लिएर आउँन्छन् । अनि यो दिनभर त्यही दृश्यमा प्रस्तुत हुन्छन् । त्यही दृश्यमा सयौ युवाहरु घण्टौसम्म बाबाको वरिपरि रहे । सो दृश्य खिचिरहँदा मेरो मोबाईल चोरी भयो ।
यस्तै हुलमुल अनि दर्शन यात्राको बढ्दो चापमा शिवरात्री सकिएको छ । दिनभरकॊ शिव महिमा गायन रोकिएको छ । फेरि हिजोका दिनहरु जस्तै दर्जन दर्शनार्थी र एकाध जोडीहरुको उपस्थितीमा पशुपतिनाथ शुन्य रहनेछन् ।
मेरो थलोमा पशुपति यात्राका तस्वीरहरु
News pasupatinath, shivaratri, Subin Shrestha
0 thoughts on “चोरमार्गबाट पशुपति दर्शन र हराएको मोबाईल”
February 27, 2009 at 6:05 pm
Grand Nepali language Usage!! Clarity in vocabulary. Sweet to Listen.